Barsiisota Kenyaa - Cloud Library
Oftti ammanumaa fi ho’insaa afuuraan kani beekamu John Bevere Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of the Lord, Under Cover, fi Driven by Eternity. kan kana fakkaatan kitaabota namoota heedduun dubbifamaan nama barreessee dha.Kitaabonni isaa afaanota 100 olitti hikamaaniiru. “The Messenger” kan jedhu sagantaa torbaan televiziyoona adunyaa mara irratti ilaalamaa jira. John Bevere sagantaa Konfaransii fi waldoole kirstaanaa keessatti lallabaa beekamaa dha. Namoota yaada waqayyoo fi seera waqayyoo hubachuu barbaadan fi hojii olchuu fedhan hundaaf Tajaajilii isaa kan jireenya jijjiiruu ta’e argameera. John hadhaa manaa isaa akkuma isaa barreessituu taate fi kitaaboonni ishee hedduu dubbiifamuu fi ijoollee isaa dhiraa arfaan waliiniif hammatii isaa wajiin magaalaa kolorado ispirings jedhamu kessaa jiraataa.
Wantoota buufatan ilaalla Email John Bevere
Kakkaa’umsaa, dhugaa kani hin dabsiine, ofitti kani ammantuu, hadhaa Mul’ata tapha kaa beektuu Liza Bevere. Lizaan akkataa biyyoolessaa irratti haasawaa guguddaa kan gootu akkasumas bareessitu kitaaba kani taate abbaa manaa ishee waliin sagantaa Televiziyoona The Messenger jedhuu irratti biyyoota 200 olitti tamsaa’uu keessatti qopheessitu dha. Lizaan haala salphaa ta’eenif jireenyaa dhala namaaf bilisummaa fi jijjiirama kan fiduu danda’u sagalee waqayyoo fakkeenya jireenyaa ishee waliin walii simsiisa dhi’eessiti. Akka naminni seeraan buluuf namootaaf hinaaffuun akka namoonni wantoota badaa ta’aan irraa ofii qusataaniif namoota adda addaa kakkaasuun irratti hojetii.Akkasumas abbaa manaa ishee John Bevere fi ijoollee ishee ilmaan dhira hadhaa manoataa isaan waliin ijoollee, ijoollee ishee wajiin yerroo ishee dabarsuun ishee gammachisa.
Wantoota buufatan ilaalla Email Lisa Bevere